Nolosha Cusub :: Qoraal :: Aqoondirsad :: Ilaah Keliya Iyo Jid Keliya :: Dersiga Tobnaad - Ducada iyo carnalka san
Qoraal > Aqoondirsad > Ilaah Keliya Iyo Jid Keliya > Dersiga Tobnaad - Ducada iyo carnalka san
Ducadu ama tukashadu waa quwad weyn oo banii-aadmigu uu yaqaan midkood. Duco baynu kaga adkaan karnaa dhibaatooyinka la moodo inaan laga adkaan karin. Soohdimo adduunka ka dhexeeya oo aan laga tallaabi karin baa duco kaga gudbi karnaa. Habase ahaatee, intaynan ducada gelin waa inaynu kaamilnaa waxyaalaha laynaga doonayo.
Baryadaadu waa in la baryaa kan saxa ah. Ilaahyada dhagaxyada ahu baryo ma maqli karaan. Ilaahyada qoryaha ahu duco garan mayaan. Ilaah keliya oo baryo maqla oo ka soo jawaabaa waa Ilaaha nool oo runta ah. Ilaahii Sayidka Ciise Masiix u soo diray si uu banii-aadmiga aawadiis ugu dhinto, weeye kan ay waajibka kuugu tahay inaad u tukatid.
Baryadaadu waa inay daacad ahaataa. Waa inaadan Ilaah weyddiisan inuu aad taajir kaaga dhigo. Waxaa suurtowda in Ilaah doonin inaad taajir noqotid. Kuwan waa dhawr baryo ama tukasho oo Ilaah aqbali karo:
Ilaahow, ii naxariiso, dembile baan ahay.
Ilaahow, i caawi si aan u garto waxaad damacday naftayda.
Ilaahow, iga caawi si aan ugu noolaado nolol nadiif ah oo markhaatifur aan kaaga noqdo dadka xaggaaga.
Ilaah wuxuu maqlaa oo ka soo jawaabaa ducooyin badan oo kale. Wuxuuna doonayaa inaad dhibaatooyinkaaga u keento. Wuxuu rabaa inuu noloshaada dhan kastaba u hoggaamiyo.
Baryado waa inay waafaqsanaataa waxa Ilaah rabo. "Oo tanu waa kalsoonaanta aynu isaga u qabno taasoo ah haddaynu wax un doonistiisa ku barinno, isagu wuu ina maqlaa. "-Warqaddii kowaad oo Yooxanaa 5:14 Ilaah wuu maqlaa, wuuna u jawaabaa kuwa Sayidka Ciise Masiix aqbalay. Waxaa suurtowda inuusan baryadeenna ka soo jawaabin markiiba. Waxaa suurtowda oo kale inuusan baryadeenna uga soo jawaabin sida aynu doonayno. Habase ahaatee Isaga wuu og yahay waxaa inoo wanaagsan oo baryadeennana wuxuu uga jawaabi doonaa si qumman.
Waa in lagu ducaystaa magaca Ciise Masiix. Ciise Masiix oo keliya ayaa ah dhexdhexaadiyaha, Ilaah iyo dadka u dhexeeya. Ciise Masiix qudhiisu wuxuu yiri, "Wax alla waxaad Aabbaha magacayga ku weyddiistaan, uu idin siiyo."- Injiilka sida Yooxanaa u qoray 15:16
Ma doonaysaa in ducadaada laga soo jawaabo? Xusuusnow waxaa laga rabo:
Tan kowaad: Waa inaad baridaa kan saxa ah.
Tan labaad: Waa inaad baryadaadu daacad ahaataa.
Tan saddexaad: Waa inaad u ducaysataa siduu Ilaah raalli ka yahay.
Tan afraad: Waa inaad ku ducaysataa magaca Ciise Masiix.
Camalka suubban waa lagamamaarmaan, in qof kasta noloshiisu lahaato. Wax yar mooyaane, qof waliba ee jiri jirayba wuxuu sameeyey ficillo wanaagsan. Qaar baa waxay caawiyeen dad jirran. Qaarna waxay sadaqo siiyeen masaakiinta. Qaar waxay u naxariisteen cadaawayaashooda.
Waxyaalahaas oo dhammu waa camallo suubban. Habase ahaatee, camalladaa wanaagsan xataa midka mid ah kaama yeelo inaad xagga Ilaah qummaatidid. Nebi Ishacyaah wuxuu ku yiri, "Xaqnimadayada oo dhammuna waa sida dhar wasakh ah."- Kitaabka Ishacyaah 64:6 Waxaa wax ugu wanaagsan oo aan samayn karnaa ay Ilaah hortiis ku yihiin, sidii calalo wasakh ah oo kale. Waxaa suurtaggal ah inaad ducaysatid oo aad shuqul wanaagsan samaysid habeen iyo maalinba oo aad haddana cadaabta gashid. Waayo, ducada iyo camalka suubbani ma aha sida Ilaah wax ku aqbalo. Sida keliya oo Ilaah wax ku aqbalo waa inaad Ciise Masiix aammintid.
Markaad Ciise Masiix aqbasho waa muhiim inaad camal wanaagsan samayso. Markaad Sayidka Ciise Masiix weyddiisatid inuu ahaado taliyaha noloshaada waa inaad isaga ka farxisid oo aad u noolaatid. "...mana aha xagga shuqullada, si aan ninna ugu faanin." - Warqaddii Rasuul Bawlos u qoray dadka Efesos 2:9 Sababta Ilaahi inoogu diidayo in aynu dembidhaafkeenna shaqaysanno, waa si aanan loogu faanin. Maanta Ilaah wuxuu dembidhaafka siinayaa qofka u qaadanaya hadiyad ahaan oo kale. Dembidhaafkaas oo aan lagu heli karin shaqo ama duco, laakiinse lagu heli karo aqbalidda Ciise Masiix oo keliya.
"Waayo, idinku waxaad ku badbaadeen nimco xagga rumaysadka, mana aha wax xaggiinna ka yimid, laakiinse waa hadiyadda Ilaah."
- Efesos 2:8-9
Ducada iyo camalka san
1. Baryada waa in la baryo
Ilaah, laguna baryo xagga Ciise Masiix oo uu soo diray isaga.
2. Ilaah wuxuu ka jawaabi doonaa ducada caynkan oo kale ah
Ilaahow, ii naxariiso, anigu dembile baan ahay.
Ilaahow taajir iga dhig.
Ilaahow i caawi si aan madaxweyne ku noqdo.
3. Ilaah wuxuu yiri, Shuqulkeenna wanaagsanu waa.
Wax isaga ka farxiya.
Sidii dhar wasakh ah.
Mid ina geyn doona jannada.
Waxaa lagu heli karaa shuqul wanaagsan.
Waxaa lagu heli karaa lacag la bixiyo.
5. Markii Ciise Masiix kuu noqdo taliyaha noloshaada, waa
Inaad isaga ka farxisid oo aad Isaga u noolaatid.
Inaad iskaga istareexdid raaxaysiga dunida.
Inaad lacag fara badan lahaataa.
6. Ilaah muxuu hadiyad ahaan u bixinayaa maanta?
7. Jidka keliya ee Ilaah kugu aqbali karaa waa maxay?
8. Markaan Ciise Masiix aqbalo maxaa igu waajib ah inaan sameeyo?
9. Ducadu waa quwadda weyn oo uu banii-aadmigu yaqaan mid ka mid ah.
10. Ciise Masiix waa dhexdhexaadiyaha keliya oo u dhexeeya Ilaah iyo banii-aadmiga.